5 Tilmaamood oo lagu ogaanayo sida loogu guuleysto Pinterest ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
5 tilmaamood oo lagu ogaanayo sida loogu guuleysto Pinterest
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 363
Pinterest waa mid ka mid ah meheradaha leh waxyaabo badan oo dadka maanta loo soo bandhigo laakiin si dhab ah uma aysan qaadan dadka ku howlan baaritaanka. gudaha laftiisa. Iyadoo ay taasi jirto, waa suurtagal in la abuuro xiriir guuleysta oo ku saabsan bogga si loo abuuro dakhli.
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee ku jira gudaha Pinterest waa in la abuuro mowduuc hawlgal ah oo ku saabsan bogga si dadka isticmaala ay u dareemaan taageerada runta ah ee abuureyaasha wax ka kooban. Sidoo kale dhinaca matalaadda halkaasoo ay fikradahooda ku xiri karaan mashaariic ayna dareemayaan inay isku xiran yihiin.
Wajahay xaaladdan oo dhan barashada waxyaabo cusub oo ku saabsan Pinterest, waa fikrad wanaagsan inaad wax ka ogtahay talooyinka jira ee ku dhex yaal barxada. Sidoo kale, fikradda ah sida loo beddelo bogga la yiri waa mid ka mid ah kuwa maanta ugu guusha badan.
5 Tilmaamood si aad ugu fiicnaato Pinterest
Ma dafiri karo in helitaanka talooyinka ugu fiican ee ku saabsan Pinterest ay tahay fikrad fiican markaad ka bilaabeysid mawduucaaga boggaaga. Si kastaba ha noqotee, talooyinkaani maahan wax walba marka ay tahay fulinta noocyada qaar ka mid ah waxyaabaha ku yaal barxadda.
Samee hal abuur si aad u abuurto biinanka
Way fiicantahay inaadan aqoon badan u lahayn abuurista naqshadaha sawirrada ama xaaladdan, si samee biin ay leedahay shirkadda Pinterest. Maxaa kordhin kara guusha ayaa ah in dadka isticmaala ay dareemaan in lagu aqoonsaday waxa la daabacay.
Xaqiiqdii, guddi dhexdiisa waxaad la wadaagi kartaa sawirro dhowr ah oo ay ku jiraan waxyaabo xiiso leh oo kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Samee loox gaar ah oo waara
Markaad timaadid sameynta guddi, waxaa jiri kara suurtagalnimada in dadka isticmaala ay fursad u leeyihiin inay eegaan biinanka ugu caansan. Waxa kaliya ee joojin kara nuucyada noocan ah waa in ay muddo baaba'aan.
Sidoo kale waa wax aad u wanaagsan in dadku ay sameysan karaan boodhadh dashboard si ay ugu adeegsadaan mashaariicdooda. Weligaaba haysashada saxiixa abuurkaaga.
Joogtee xiriirinta shabakadaha kale
Haddii aad tahay qof jecel aqoonta udhaxeysa shabakadaha, waxaa suurtagal ah inaad dhaqan geliso mid ka mid ah isku-dhafka aan la isku halleyn karin ee ku dhex jira diyaaradda dhijitaalka ah. Dareenkan, waad la macaamili kartaa inta udhaxeysa shabakadaha adoo sheeganaya isticmaaleyaashaada ama ku xiraya aalado kale mahad Pinterest.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa kugula socda bogagga kale waxay awoodi doonaan inay ku arkaan hal-abuurkaaga, riyooyinkiinna iyo mashaariicdiina barxadda pin.
La falgal dadka isticmaala
Macno malahan hadii ay jiraan isticmaaleyaal internet oo adiga ku raacaya ama aan ku dhex jirin shabakadaha bulshada, waxa muhiimka ah had iyo jeer waxay ku jiri doonaan waxa aad u hayso iyaga siiyaan iyo in tani ay tahay mid is-weydaarsi badan.
Daaweyntu waa inay ahaataa mid dhow oo saaxiibtinimo leh laakiin sidoo kale is-dhexgal ah si loogu abuuro kalsooni dadka isticmaala.
Si daacad ah ula xiriir
Ha isku dayin inaad ku daydaan dadka ugu caansan, isku day inaad wax ka qabato dhammaan dhibaatooyinka soo ifbaxa had iyo jeer la sixirka runta ah ee waxa aad tahay. Qofna iskuma dayi doono inuu ka saaro waxyaabahaaga haddii aad adiga tahay.
1 5 Tilmaamood si aad ugu fiicnaato Pinterest
1.1 Samee hal abuur si aad u abuurto biinanka
1.2 Samee loox gaar ah oo waara
1.3 Joogtee xiriirinta shabakadaha kale
1.4 La falgal dadka isticmaala
1.5 Si daacad ah ula xiriir
Sidee loo dhejiyaa shaashad fiidiyoo Youtube ah?
Sidee loo soo degsadaa fiidiyowyada Youtube ee Android?